Xulashada Fannaaniinta ayaa ka Bilowday Khadadka Magaalada Istanbul Ferry | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulXulashada Fannaaniinta ayaa ka Bilaabatay Khadadka Magaalada Istanbul ee Ferry
19 / 02 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Khadadka Magaalada Istanbul waxay bilaabeen inay doortaan muusikleyda
AŞ waxay ku daraysaa kuwa cusub codadka ku dhigaya muusikada biraha. Kent Hatları AŞ, oo abaabulaya tartan lagu wanaajinayo tayada muusikada ee qalabka saydhiska, ayaa bilaabay inuu qiimeeyo codsiyada laga sameeyo miiska cad. Maalintii ugu horreysay, 13 koox iyo sololiyeyaal ayaa ka hor muuqday xeer-beegtida oo ay fuliyeen.
3 QOFKA JURY JOOJIYO
Sarkaalka Maamulka iyo Arimaha Bulshada iyo Xiriiriyaha Muusikada Steamer Tunç Baydar, macalinka jaamacadda Üsküdar Nazım Çınar iyo farshaxanka violin ee Batuğhan Çakmak Kadıköy Wuxuu dhagaystay muusiqiyadihii ku sugnaa hoolka tababarka Ferry Pier. 31 ka mid ah muusikiisteyaasha ka diiwaangashan Beyaz Masa, 13 guutooyin iyo soloris ayaa labadaba muujiyay karti ay ku ciyaaraan aaladda oo ay ku heesaan garsoorka hortiisa.
DEDETAŞ: WAA FARSAMADA AYAAN UGU FAHAMAYNAA MUSICIANS
Isagoo xusuusinaya inay ku jiraan 82 muusikiiste oo ku jira barkada muusikada ee uumiga, City Lines Inc. Maareeyaha Guud Sinem Dedetaş wuxuu yiri inay rabaan inay siiyaan fursado badan oo muusiko ah. Dedetaş wuxuu yidhi, “Waxaan hiigsaneynaa inaan safarka rakaabkeenna ka dhigno mid raaxo leh annagoo kordhinayna tayada muusikada muusikada. Isla mar ahaantaana, waxaan rabnaa inaan siinno fannaaniin fursad ay ku dhawaaqaan muusikadooda. ”
82 muusikiiste oo ku jira barkada muusikada ee uumi-gashuhu sidoo kale waa la dhagaysan doonaa tartanka, kaas oo hadafkiisu yahay furitaanka muusig tayo sare leh. Xiriiriyaha Fannaaniinta Steamer Tunç Baydar wuxuu sheegay in fannaaniintani ay xukumi doonaan xeerbeegtida Isniinta (Febraayo 24-keeda). Xeerbeegtida ayaa sidoo kale sii wadi doonta qiimeynta codsiyada loo gudbiyo Shaxda Cad bisha soo socota. Musharixiinta da'doodu ka weyn tahay 20 sano, ee ah sayga u sarreeya, ka qalin-jabiyaasha xafladaha ama ardayda ayaa la doorbidi doonaa. Markii la dhammeeyo tirakoobka, barkadda muusikada ee Şehir Hatları AŞ waa la cusbooneysiin doonaa.
Khadadka waxaa lagu gartaa XARUNTA SADDEXAAD
Fannaaniinta, kuwaas oo siiya fursad rakaabka doonta doonta si ay u dareemaan muusikada una daawadaan Istanbul, KadıköyBesiktas, Kadıköy-Eminö ah Kadıköy-Karaköy iyo Üsküdar-Eminönü doomaha ayaa muujinaya wax qabadkooda. Fannaaniinta, kuwaas oo leh aqoonsiyo gaar ah oo ay bixiyeen Wadooyinka Magaalada, waxay ciyaaraan oo ku heesaan 09.00 saacadood maalintii khadadka is beddela saddexdii biloodba mar inta u dhexeysa 24.00-3 maalin kasta.
Moto 250 Cup Maqalka lagu hayo Afyon
Gabadhii muusigga ah ee Gulishah Erol ayaa ku garaacday Istanbul Metro